warkii.com » Qoomamadii Lampard, Laacibkii Noqday Xiddiga Garoonka & Qiimeynta Ciyaartoyda Kulankii Ay Liverpool Dubatay Chelsea
Qoomamadii Lampard, Laacibkii Noqday Xiddiga Garoonka & Qiimeynta Ciyaartoyda Kulankii Ay Liverpool Dubatay Chelsea
Miyay Chelsea u soo bixi doontaa Champions League? Chelsea waxay u baahneyd barbaro kulankii xalay si ay ugu soo baxaan Champions League, markii ay ciyaarta ka dhigeen 4-3 waxay u muuqatay mid suurtogal ah inay barbareeyaan.
Taas bedelkeeda, guuldaradii soo gaartay waxay la micno tahay in soo bixitaanooda ay go’aansan doonaan maalinta ugu danbeysa xilli ciyaareedka. Waxay la ciyaari doonaan kooxda kaalinta lixaad ee Wolves oo iyagaba booskooda tartamada Yurub ceyrsanaya, waxayna u baahan yihiin inay difaacooda adkeeyaan haddii ciyaarta Leicester City iyo Man United ay ku qasabtay inay natiijo helaan.
Trent-Alexander Arnold (Liverpool) Sida Gareth Bale loogu heyn waayay daafac garab ayuu Alexander-Arnold isaguna sameynayaan. Inkastoo uu wacdarro ku dhigaya booska daafaca midig oo uu ka soo weerartamayo hadana darbadiisa, farsamadiisa iyo guud ahaan awoodiisa ciyaareed ayaa ka dhigeysa mid isku bedeli kara weeraryahan garabka ka ciyaara mustaqbalka dhow.
Laad xor cajiib ah uu dhaliyay iyo karoos aan la rumeysan karin uu u dhigay Roberto Firmino oo shabqa soo taabtay ayaa ka mid ah waxyaabihii cajiibka ahaa ee uu xalay sameeyay. Alexander-Arnold waa da’ yarka ugu fiican horyaalka Premier League waqti xaadirkaan.
Tababaraha Chelsea Frank Lampard ayaa isku canaanan doona sababtii uusan ugu soo bilaaban Christian Pulisic kaasoo wacdarro dhigay markii uu ciyaarta bedel ku soo galay, shaxdii uu ku soo bilaabay waxaa ka muuqday kaliya Willian, Mason Mount iyo Giroud halka inta kale ay noqdeen kuwa carabka u saarnaa Liverpool.
Goolhaye Arrizabalaga ayaa helay qiimeyntii ugu hooseysay ciyaarta, halka xiddigaha ugu qiimeynta sareeya ee Chelsea ay noqdeen xiddigaha bedelka ku soo galay ee Pulisic iyo Hudson-Odoi.
Dhanka Liverpool waxaa ugu qiimeyn hooseeyay goolhaye Alisson oo ku qiimeyn ah sideed ka mid ah xiddigaha Chelsea ee ciyaartaan ku soo bilowday.
Bedel: Milner (5), Jones (5), Oxlade-Chamberlain (NA), Minamino (NA), Origi (NA)
Bedel: Abraham (6), Pulisic (8), Hudson-Odoi (7), Emerson (NA)